AKgoLive – Gaming Noodle
ပြည်တွင်း Animation Studio ဖြစ်တဲ့ Pencell နဲ့ ပူးပေါင်းထုတ်လုပ်မယ့် AKgoLive
[ZawGyi] ပြည်တွင်း Animation Studio ဖြစ်တဲ့ Pencell နဲ့ ပူးပေါင်းထုတ်လုပ်မယ့် AKgoLive ပြည်တွင်း နာမည်ကြီး ဂိမ်း Streamer တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ AKgoLive ဟာ စက်တင်ဘာ (၂၂) ရက်နေ့မှာ သူ့ရဲ့ Pre Birthday and Fan Meeting ပွဲကို ရန်ကုန်မြို့ Junction City ရှိ Promotion Area မှာ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါပွဲဟာတော့ လာမယ့် စက်တင်ဘာ ၂၅ ရက်နေ့မှာ (၂၅) နှစ်ပြည့်မယ့် Arkar Tun ခေါ် AKgoLive ရဲ့ မွေးနေ့အကြိုနဲ့ သူ့ရဲ့ပရိသတ်တွေနဲ့ ဆုံတွေ့နိုင်ဖို့အတွက် ရည်ရွယ် ကျင်းပတာဖြစ်ပြီး ပြည်တွင်း ဂိမ်း …
ပြည်တွင်း Animation Studio ဖြစ်တဲ့ Pencell နဲ့ ပူးပေါင်းထုတ်လုပ်မယ့် AKgoLive Read More »
Samsung enters Myanmar Esports scene with PUBG Mobile
One of the biggest mobile phone brands in the world, Samsung enters into Myanmar esports scene by hosting and sponsoring PUBG Mobile Tournament and personalities. PUBG Mobile is the mobile version of PlayerUnknown’s Battlegrounds, an online multiplayer FPS battle-royale game, which is published by Tencent Games. It currently is the one of the most famous …
Samsung enters Myanmar Esports scene with PUBG Mobile Read More »
Esports နယ်ပယ်ထဲကို PUBG Mobile နဲ့ဝင်လာတဲ့ SAMSUNG
Esports နယ်ပယ်ထဲကို PUBG Mobile နဲ့ဝင်လာတဲ့ SAMSUNG ကမ္ဘာကျော် ဖုန်းနဲ့အီလက်ထရောနစ် အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Samsung ဟာ မြန်မာနိုင်ငံ Esports Community အတွက် အကျိုးရှိစေမယ့် အပြောင်းအလဲတစ်ခုအနေနဲ့ လက်ရှိခေတ်စားနေတဲ့ နာမည်ကြီးမိုဘိုင်းဂိမ်း PUBG Mobile အတွက် ဆုကြေးငွေ သိန်း ၁၀၀ ကျော်ပေးအပ်မယ့် ပြိုင်ပွဲကို မကြာမီ ကျင်းပပေးတော့မှာပါ။ ဒီပြိုင်ပွဲကို Galaxy Challenge Samsung 2019 လို့အမည်ပေးထားပါတယ်။ နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ Samsung က မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နာမည်ကြီး Streamer တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Arkar Tun (AkgoLive) ကိုလည်း Samsung Mobile Game Brand Ambassador အဖြစ် ခန့်အပ်လိုက်တာပါပဲ။ နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ ပြည်တွင်းအခြေစိုက် …
Esports နယ်ပယ်ထဲကို PUBG Mobile နဲ့ဝင်လာတဲ့ SAMSUNG Read More »